ဒိတ်တင်လုပ်နေကြပါတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာတဲ့ Kang Daniel နဲ့ Jihyo - For her Myanmar
ကြားပြီးကြပြီလား ယောင်းတို့ရေ.. Kang Daniel နဲ့ Twice ရဲ့ Jihyo တို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြပါပြီတဲ့..
ဒီသတင်းကိုတော့ Dispatch က အရင် ဖော်ထုတ်လိုက်တာပါ။ သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့က Hannam-dong မှာ Jihyo နဲ့ Daniel တို့ ဒိတ်နေကြတာကို တွေ့ခဲ့ကြရပြီး တကယ်တမ်း သူတို့တွဲနေတာ နှစ်စကတည်းက ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ Daniel ရဲ့ အိမ်မှာ ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီနေရာအထိ Jihyo က သူ(မ)ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူ တစ်ယောက်ရဲ့ အပြောအရတော့ Daniel နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ Idol (စီနီယာ) တစ်ယောက်က မိတ်ဆက်ပေးလို့ နှစ်ယောက်သား ရင်းနှီးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်ကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ နှစ်ယောက်သား တွေ့ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
Twice ရဲ့ World Tour အတွက် ကိုရီးယားက Jihyo မထွက်သေးခင် တစ်ရက်နဲ့ ပြန်လာပြီး နောက်ရက်တွေမှာ အတူတူ ရှိခဲ့ကြသလို Kang Daniel ရဲ့ Solo Debut Showcase လုပ်ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၅ မှာလည်း သူတို့နှစ်ယောက် အတူတူ ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
Dispatch က ဒီသတင်းတွေ တက်လာတုန်းကတော့ သြော်.. ဒီလိုပဲ ကောလဟာလတွေ နေမှာပါလို့ တွေးခဲ့ပေမဲ့ ခုတော့ JYP Entertainment ကရော Daniel ရဲ့ KONNECT ကပါ ဒီသတင်းကို အတည်ပြုလိုက်ပါပြီနော်..
သူတို့အတွဲလေးကို ယောင်းတို့ရော ဘယ်လို မြင်ကြလဲ?
References : Soompi , All Kpop
အသညျးကှဲဖို့အတှကျ ကွိုပွငျဆငျပွီးသား… T.T
ကွားပွီးကွပွီလား ယောငျးတို့ရေ.. Kang Daniel နဲ့ Twice ရဲ့ Jihyo တို့ ခဈြသူတှေ ဖွဈနကွေပါပွီတဲ့..
ဒီသတငျးကိုတော့ Dispatch က အရငျ ဖျောထုတျလိုကျတာပါ။ သွဂုတျလ ၁ရကျနကေ့ Hannam-dong မှာ Jihyo နဲ့ Daniel တို့ ဒိတျနကွေတာကို တှခေဲ့ကွရပွီး တကယျတမျး သူတို့တှဲနတော နှဈစကတညျးက ဖွဈလိမျ့မယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူတို့ဟာ Daniel ရဲ့ အိမျမှာ ခြိနျးတှခေဲ့ကွတာ ဖွဈပွီး အဲဒီနရောအထိ Jihyo က သူ(မ)ကားကို ကိုယျတိုငျမောငျးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။
နှဈယောကျလုံးနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူ တဈယောကျရဲ့ အပွောအရတော့ Daniel နဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ Idol (စီနီယာ) တဈယောကျက မိတျဆကျပေးလို့ နှဈယောကျသား ရငျးနှီးခဲ့ကွတာ ဖွဈပွီး တဈပတျကို တဈခေါကျလောကျတော့ နှဈယောကျသား တှဖွေ့ဈကွတယျလို့ ဆိုပွနျပါတယျ။
Twice ရဲ့ World Tour အတှကျ ကိုရီးယားက Jihyo မထှကျသေးခငျ တဈရကျနဲ့ ပွနျလာပွီး နောကျရကျတှမှော အတူတူ ရှိခဲ့ကွသလို Kang Daniel ရဲ့ Solo Debut Showcase လုပျခဲ့တဲ့ ဇူလိုငျ ၂၅ မှာလညျး သူတို့နှဈယောကျ အတူတူ ရှိခဲ့ကွတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
Dispatch က ဒီသတငျးတှေ တကျလာတုနျးကတော့ သွျော.. ဒီလိုပဲ ကောလဟာလတှေ နမှောပါလို့ တှေးခဲ့ပမေဲ့ ခုတော့ JYP Entertainment ကရော Daniel ရဲ့ KONNECT ကပါ ဒီသတငျးကို အတညျပွုလိုကျပါပွီနျော..
သူတို့အတှဲလေးကို ယောငျးတို့ရော ဘယျလို မွငျကွလဲ?
Tags: breaking news, Cele News, Celebrity news, Kang Daniel, Kihyo